eNasha.com - उराठ दशैँ, सात पार्टी, अनिर्णय र जनता
उराठ दशैँ, सात पार्टी, अनिर्णय र जनता
यस पटकको दशैँ सोचेजस्तो तपाइँको पनि नभएको हुनुपर्छ । कारण स्पष्ट छ, दशैँमा राजनीतिक निकास निस्कन्छ भन्ने राजनीतिक नेताहरुको भनाइ सधैँ झैँ 'फेल' खाएको छ । हरेक दिन कान्तिपुर टेलिभिजनको समाचारमा जनमत हेर्नुस् या एसएमएस मत सर्भे हेर्नुहोस्, तिनले राजनीतिक नेता, पार्टी र देशको भविष्यका विषयमा कसरी निराशा फैलिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । जनताले १९ दिने आन्दोलनमा ल्याएको उपलब्धि अब उपलब्धिहीनताको स्थिति सिर्जना भएको छ भन्ने सन्दॆश दिएको छ ।
माओवादीहरु भन्छन्, मौजूदा स्थितिमा समूल परिवर्तन आवश्यक छ । एमाले र काँग्रेस अहिलेकै अवस्थामा परिवर्तन खोजिनु पर्छ । राप्रपा, जनशक्ति र अन्य पार्टी सके राजालाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने स्थितिमा आइसके । मधेशी जनअधिकार फोरम र सद्भावना पार्टी अहिले कुहिरोका काग बनेका छन् । अब दशैँ पछाडि कसको हत्या हुने हो र कसले चन्दा आतङ्क भोग्नु पर्ने हो, यो अनिश्चय छ । तर यो पक्का छ, जनताले फेरि पनि आशा गरेका कुराहरु यस पटक पनि सम्पन्न हुने छैनन् । माओवादीले संसद् छाड्ने धम्की दिइसकेको छ । उसले कुन मोडलको नयाँ नेपाल चाहेको यो स्पष्ट हुन सकेको छैन । कांग्रेस र एमाले यथास्थितिवादमा रमाउन चाहिरहेका छन्, जुन अहिलेको अवस्थामा निकै घातक पनि हुनेछ । अब देश यथास्थितिबाट गुज्रन सक्तैन । गुजार्नु पनि हुँदैन ।
हामी त्यसै पनि राणाकालीन १०५ वर्षपछि पर्‍यौँ । त्यसपछि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होला भनेर सोचेका थियौँ, त्यो पनि हुन सकेन र नेपालमा २०१७ साल देख्नु पर्‍यो । यसपछि पुनः हामी ३० वर्षपछाडि धकेलियौँ, आफ्ना हक अधिकारबारे बुझ्न, सोच्न र निश्चय गर्न । यो सत्य हो, अधिकांश समय सत्ताको वरिपरि रहेका गिरिजाबाबुले देशलाई उन्नतिको शिखरमा पुर्‍याउन चुकेकै थिए । त्यसमाथि महाभ्रष्ट मन्त्री पनि उनैले पालेर राखे । तिनलाई अख्तियारले 'सफा' मन्त्रीका रुपमा चोख्याउनु पर्‍यो । कर्मचारी नियुक्तिमा व्यापक राजनीतिककरण गरेर नोकरशाहीतन्त्रलाई कांग्रेसले नै ध्वस्त पार्‍यो । एमाले र कांग्रेस नै हुन्, जसको आन्तरिक र वाह्य संघर्षले नै सशस्त्र व्रिद्रोह निम्त्यायो ।
केही समययता गिरिजाबाबु नेपालकै सबैभन्दा अग्ला र सग्ला व्यक्तित्वका रुपमा उभिएको देखिन्थ्यो तर त्यो कद पुड्किसक्यो । किनभने उनले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन त सकेनन् नै न त उनले लिएका अडानमा जनताले विश्वास गर्नसक्ने स्थिति रह्यो । एमाले फेरि पनि हिजोका दिनमा विचराको विचरा नै रहेको छ । उसले माओवादी र कांग्रेसबीच न त मध्यस्तता गर्न सकेको छ, न त उसले आफ्नो नै कुनै गतिलो राजनीतिक नारा बनाउन सकेको छ । माओवादी र कांग्रेसबीचको पेण्डुलम बन्न पुगेको छ एमाले ।
यो स्पष्ट देखिएको छ, केही समययता महाभयङ्कर क्रान्तिकारी देखिएको मधेशी जनअधिकार फोरम दुइ चिरामा परेको छ र एउटा पक्ष महाअवसरवादी र अर्को चाहिँ आफू मात्र असली 'मुक्तिदाता' देखाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेशको उन्नति र विकास आकाशको फल बन्न पुगेको छ ।
यिनै राजनीतिक द्वन्द्वका कारण राजाले कुमारी घरमा गएर कुमारी देवीलाई पूजाआजा मात्र गरेनन्, घटस्थापनाको दिन तलेजु भवानीको मन्दिरमा समेत पुगे । राजाको चाल देख्दा यस्तो लाग्छ, मानौँ उनी अपदस्त राजा होइनन् । यसैबीच पार्टी विरोधी नारा र राजाका समर्थनमा आवाजसमेत उठाइए । यसबाट स्पष्ट छ, अब राजा जरैबाट उखेलिने छैनन् ।
माओवादीको नीति खतरनाक छ । उनीहरुले निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहेकै थिए, यो त उनीहरुले भदौमा गरेको घोषणा र माओवादी प्लेनमले निकालेको निश्कर्षबाटै स्पष्ट हुन्थ्यो । नभन्दै निर्वाचन स्थगित भएको छ । एनआरएनको भेलामा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले देशको मौजूदा स्थितिलाई समूल नष्ट गर्न अर्को एक आन्दोलनको आवश्यकता रहेको बताएर उनीहरुले लामो दूरीको दौडमा भाग लिइरहेको स्पष्ट छ । त्यसलाई तराइमा भइरहेको सशस्त्र आन्दोलनले पनि सघाउने देखिन्छ । तर यो माओवादी र ती सशस्त्र आन्दोलन चाहिँ एक हुने होइनन्, तिनले सिर्जना गर्ने 'तराई बन्द', लुटपाट, चन्दा आतंक आदिले जनताको मौजूदा नेतृत्वबीचको निराशा अझ फराकिलो हुनेछ । यस्तो अवस्थामा गिरिजाबाबुको नेतृत्व असफल भएको घोषणा गर्दै माओवादीले आन्दोलन गर्नेछन् । तर यो हेर्न बाँकी छ, यो आन्दोलनले सफलता पाउँछ कि पाउँदैन । माओवादीको अर्को विश्लेषण के पनि हुँदो हो भने, निर्वाचन लम्बिँदै जाँदा माओवादीले भन्ने गरेको सक्रिय राजाको कुरा स्पष्ट उभार हुनेछ । जस्तो कि राजाले कुमारी घर र घटस्थापनामा तलेजु भवानीको दर्शन गरेपछि देशमा राजाले पुनः सैनिक शासन चलाउने छन् भन्ने भ्रमलाई माओवादीले अझ गाढा बनाउने छन् । यो अब राजाको हातमा छ कि उनी माओवादीको 'गेम प्लान' अनुसार गोटी हुनेछन् या छैनन् । यदि माओवादीको गोटी भए भने उनले एक पटक पुनः सत्ता हत्याउने प्रयास गर्नेछन् र यसैको आड लिएर माओवादी आफू सत्तामा प्रथम पुरुष हुने छन् ।
गिरिजाबाबुलाई असफल देखाएर उनीहरु सत्तामा जाने प्रयासमा रहेको कुरा त पहिल्यै थाहा भएको हो । तर गिरिजाबाबुलाई प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका कारण अहिल्यै माओवादी सफल होलान् भन्ने देखिँदैन । सफलताका लागि अर्को एउटा आन्दोलनको कुरा त प्रचण्डले धेरैअघिदेखि भनिआएकै कुरा हो र त्यो आन्दोलन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन र भयो भने पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति कस्तो हुनेछ, त्यसमा निर्भर छ । तर यो स्पष्ट छ, अमेरिका र भारत कुनै कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा आएको देख्न चाहँदैन । यसका लागि उसले प्रयोग गर्नुपर्ने साम, दाम, दण्ड र भेद सबै उपयोग गर्छ । यस्तो स्थितिमा माओवादीले अन्य दलहरुसँग अझै एक दशकसम्म आफूलाई राजनीतिक दलका रुपमा सहकार्य गर्नुपर्ने महसूस त उसले पहिल्यैदेखि गर्दै आएको हो ।
यस्तो अवस्थामा अब नेपालको राजनीतिक स्थिति के हुनेछ ? वैशाखसम्ममा मानौँ चुनाव भयो भने राजावादीहरुले राजालाई तल पार्ने छैनन् । गणतन्त्रको नारा कुहिएको साग हुनेछ । नेपालमा पहिलेको भन्दा थोरै प्रजातन्त्र आउनेछ (लोकतन्त्र अझै आइपुग्ने छैन) । अप्रिल आन्दोलन एउटा भयङ्कर गल्ती थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यो के गल्ती भने, पार्टीले राजालाई तत्कालै फ्याँकेर गणतन्त्र घोषणा नगरेको गल्ती । कांग्रेस ढिला गरी गणतन्त्रको पक्षमा आएको गल्ती ।
के गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न यदि गर्छ भने मलाई त केसम्म लाग्छ भने कांग्रेस एक जुट हुनु हुन्थेन । मंसीरमा चुनाव हुनुपर्ने थियो । यस्तो अवस्थामा मिश्रित प्रणालीबाट चुनाव हुँदा कोही पनि बहुमतमा हुने थिएन । सबै पार्टी सम्मिलित सरकार हुने थियो । यसले सबै किसिमका विचारधारालाई अटाउन सक्ने संविधान निर्माण गर्ने थियो र राजा हट्ने थिए । गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति गिरिजाबाबु हुने थिए । त्यसो त देश अस्थिर नै हुने थियो तापनि जनता पहिलो पटक दरबार पुग्थे र राष्ट्रप्रमुख हुने थिए । विकासको रोल मोडल राजनीतिक पार्टीसँग अझै पनि अभाव हुने थियो तर पनि सशक्त नागरिक समाज, विद्रोही समूह आदिले देशको कुनाकाप्चामा विकासको मोडल खाँचो छ है भन्ने घच्घच्याइरहन्थे । छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनले विकासको उत्कर्ष चाखिरहेको बेला नेपाल पनि त्यतै नलम्किई सुख हुँदैनथ्यो र नेपालीहरुले माओवादी, कांग्रेस, एमाले र तराइवादी पार्टीको संयुक्त पूँजीवाद महसूस गरिरहेका हुने थिए । तर यो पक्का भइसक्यो, देशमा राजा रहन्छन् र देश अझै पनि घिसापिटा रुपमा थोत्रा राजनीतिक पार्टीले चलाइरहने छन् ।
संविधानसभा हल्ला माओवादी awards समलिङगी सेलेब्रिटी मोबाईल पेट्रोल अनुभव crisis hi-life streets festival events celebrity